News 18 Nepal || शिक्षा
कक्षा १२ को परीक्षा अनलाइनबाट नहुने, यस्तो छ तयारी
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीले स्थगित कक्षा १२ को परीक्षा अनलाइनबाट नभइ भौतिक उपस्थितिमै हुने भएको छ । भौतिक दूरी कायम गर्दै कक्षा १२ का विद्यार्थीको अन्तिम परीक्षा भौतिक उपस्थितिमा नै लिइने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रष्ट पारेको छ । विद्यार्थीलाई भौतिक उपस्थितिमा नै परीक्षा लिन कुनै समस्या नभएको र त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा. डा. चन्द्रमणि पौडेलले जानकारी दिए । परीक्षा सञ्चालन हुन लागेका ५० जिल्लाका...
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तहको शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको छ । गएको वैशाखमै हुनुपर्ने परीक्षा कोरोना भाइरसको कारण स्थगित भएको थियो । स्थगित परीक्षा मंसिर २८ गतेदेखि सुरु गर्ने गरी नयाँ तालिका सार्वजनिक भएको हो । वार्षिक प्रणाली अन्तर्गत स्नातक तह चौथो वर्षमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी परीक्षा लिने र नतिजा प्रकाशन गर्ने विश्वविद्यालयको तयारी छ । विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र...
सात महिनादेखि बन्‍द विद्यालय सोमबार देखि खुल्ने
वीरगन्ज । कोरोना महमारीका कारण ७ महिनादेखि बन्द रहेका वीरगन्ज महानगरका सामुदायिक विद्यालय सोमबारदेखि खुल्ने भएका छन् । वीरगन्ज महानगरपालिकामा आइतबार बसेको सरोकारवालाको बैठकले ८, ९ र १० कक्षाको मात्रै पठनपाठन हुने गरी सामुदायिक विद्यालय सोमबारदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल सरकारले तोकेका स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर विद्यालय सन्चालन गर्ने निर्णय गरिएको नगर प्रमुख विजय सरावगीले जानकारी दिए । कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीमा विद्यार्थीको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने...
मंसिर ९ गतेबाट कक्षा १२ को परीक्षा, शनिबार पनि हुने
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले देशभर मंसिर ९ गतेबाट कक्षा १२ को परीक्षा संचालन गर्ने भएको छ । बोर्डले बुधबार परीक्षा सम्बन्धी समय तालिका सार्वजनिक गरेको हो । बिहान ८ बजेदेखि साढे ९ बजेसम्म परीक्षा संचालन हुनेछ । वैशाख ८ गतेदेखि संचालन हुने परीक्षा कोरोना संक्रमणको कारण स्थगित गरिएको थियो । स्वास्थ्य मापदण्ड र सामाजिक दुरी कायम गरेर परीक्षा संचालन गरिने बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । शनिबार पनि...
कहिले हुन्छ कक्षा १२ को परीक्षा ? खुल्यो यस्तो रहस्य
काठमाडौं । कोरोना महामारीको संक्रमण बढेसँगै कक्षा १२ को परीक्षा अन्योलमा परेको छ । विद्यालय तह तथा विश्वविद्यालय तहमा वैकल्पिक विधिमार्फत परीक्षा भइरहेका छन् । कक्षा १२ को भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले वार्षिक परीक्षा गर्ने छ । तर, सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र परीक्षा गर्ने तयारी बोर्डको छ । सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्दा परीक्षा दिन बसेका चार लाख ३२ हजार विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् । कोभिड-१९ का कारण वैशाखमा...
भारतमा कोरोना कहर : यस्तो छ पछिल्लो अवस्था
ओलीको प्रतिवेदनमा आफ्नो शासनकाल ‘स्वर्णयुग’ नै रहेको अहंकार